वियर मादक पदार्थ होइन, अचुक औषधि पनि हो ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
वियर मादक पदार्थ होइन, अचुक औषधि पनि हो ?
प्रकाशित मिति १६ जेष्ठ २०७६, बिहीबार २०:३० लेखक नेपाली जनता
नेपाली संस्कृतिमा वियर पिउनुलाई राम्रो मानिदैन । बियरलाई मादक पदार्थका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । बियर पिउनु वा नपिउनु तपाईंको इच्छामा निर्भर हुन्छ ।
तर, पछील्लो समय वियरको प्रयोग निकै हुने गरेको छ । वियर पिउनु हुन्न भने तपाइलाई वियर खाँदा यति धरै फाइदा छन् भन्दा अनौठो लाग्ला ।
अमेरिकामा हालै गरिएको एक अध्यनले वियर पिउने मानिसलाई मृगौलाको पत्थरी हुने खतरा , नखानेको तुलनामा निक्कै कम हुन्छ भन्ने पत्ता लगाएको छ । थोरै मात्रामा वियर पिउनु स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ । अल्कोहलको मात्रा बढी हुँदा स्वास्थ्यमा खरावी हुने कुरा सबैलाई थाहा छ ।
२। बियर पिउन हो भने ह्दयघातबाट बच्न सकिन्छ । आर्टरीमा भएको बोसो तथा कोलेस्टरोल हल्का मात्रामा वियर खाने हो भने कम हुन्छ ।तर ठिक्क मात्रामा वियर पिउँदा भने स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुने नयाँ अध्यनले देखाएको छ । वियर नियमित पिउँदा शरीरमा पानीको कमी हुने खतरा हुँदैन । अअमेरिकामा हालै गरिएको एक अध्यनले वियर पिउने मानिसलाई मृगौलाको पत्थरी हुने खतरा , नखानेको तुलनामा निक्कै कम हुन्छ भन्ने पत्ता लगाएको छ ।
९। बियरले क्यान्सर हुने जोखिमलाई पनि कम गर्दछ । यसमा भएका केही तत्वलाई क्यान्सर तथा शरीर दुख्ने अन्य रोगसँग लड्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । बियरमा हुने ह्युमुलोन्स तथा लुपुलोन्स नामक एसिडले हाम्रो शरीरमा ब्याक्टेरियाको वृद्धिलाई रोक्दछन् भने तथा रोग लाग्नबाट पनि बँचाउछन् । साथै यी तत्वले क्यान्सरलाई पनि नियन्त्रण गर्ने गर्दछन् ।तर ठिक्क मात्रामा वियर पिउँदा भने स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुने नयाँ अध्यनले देखाएको छ । वियर नियमित पिउँदा शरीरमा पानीको कमी हुने खतरा हुँदैन । अअमेरिकामा हालै गरिएको एक अध्यनले वियर पिउने मानिसलाई मृगौलाको पत्थरी हुने खतरा , नखानेको तुलनामा निक्कै कम हुन्छ भन्ने पत्ता लगाएको छ ।
यदि तपाईं आफ्नो हड्डी बलियो बनाउन चाहुनुहुन्छ भने तपाईंले बियर पिउन सक्नुहुन्छ । बियरमा पाइने सिलिकन हड्डीका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । तर ठिक्क मात्रामा वियर पिउँदा भने स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुने नयाँ अध्यनले देखाएको छ । वियर नियमित पिउँदा शरीरमा पानीको कमी हुने खतरा हुँदैन ।
चट्याङ लागेर लमजुङमा १ जनाको मृत्यु
लमजुङ । गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत लमजुङमा चट्याङ लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ । मध्यनेपाल नगरपालिका–३ सूर्यपाल लामाचौर गाउँका १८…
‘लुटेर’ खानु पर्छ भन्ने गीत जनताले मन पराएनन् : प्रधानमन्त्री (भिडियो)
काठमाडौं । गायक पशुपति शर्माको गीत युट्युवबाट हटटाइएको बारे प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पहिलोपल्ट प्रतिक्रिया…
यी स्व. राजा, जसले कुकुरलाई इन्सल्ट गर्नेलाई ३७ वर्ष जेल हाले (तस्विरहरू)
काठमाडौं । थाइल्याण्डका राजा दिवंगत भूमिबोल अदुल्यादेज कुकुरका निकै सौखिन…
काठमाडौं । विवाहको पहिलो रातलाई सुहागरात भनिन्छ । यो सबैको जीवनको एक महत्त्वपूर्ण पाटो हो । यो रातलाई लिएर…